Dhageyso Waaliga Hiiraan Oo Arimo Muhiim Ah Laga Wareystay. – Calamada.com
Dhageyso Waaliga Hiiraan Oo Arimo Muhiim Ah Laga Wareystay.
Waaliga WI Hiiraan, Shaykh Guuleed Abuu Nabhaan ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Idaacada Islaamiga Andalus wuxuu kaga warbixiyey weeraro gaadiid looga qabsaday cadowga oo dhawaan ka dhacay Wilaayadaasi.
Waaliga ayaa faafaahin dheeraad ah ka bixiyey weeraradaas iyo qasaare kala duwan ee cadowga lagu soo gaarsiiyey, Isagoona sheegay in ugu yaraan lix askari oo murtadiin ah lagu dilay, sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa 20 Askari oo kale.
“Qasaaraha nafeed ee cadowga soo gaaray waxaa marka la isu geeyo lagu sheegay ilaa lix askari oo baqti ah, iyo dhaawaca 20 kale, Waxaana mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ilaa 2 gaari oo mid ka mid ah uu ahaa kuwa raaxada” ayuu yiri waaliga Xilli uu wareysi siinayey Idaacada Islaamiga Andalus.
Waaliga ayaa sidoo kale sheegay in cadowga lagu adkeeyey go’doonka ku heysta magaalooyinka uu ka joogo wilaayada Hiiraan, islamarkaana Mujaahidiintu ay wadooyinka ku ugaarsadaan gaadiidka sida dhuumashada ah khaatka iyo gurmadka ku soo gudbiya.
Wuxuu tilmaamay in murtadiinta mudooyinkii dambe ay isticmaalayeen wadooyin qardo-jeex ah balse libaaxyada Islaamka ay fahmeen qorshahaas, islamarkaana wadooyinka dhamaan la dhigay ciidamo heegan u ah beegsiga gaari waliba oo uu socda cadowga.
Intii lagu gudajiray wareysiga, wuxuu waaligu sheegay in gelinkii dambe ee maanta ay sidoo kale mujaahidiintu Khaarijiyeen nin murtad ah oo in muddo ah ay doon-dooneysay Wilaayada, islamarkaana la shaqeynayey cadowga Islaamka. Wuxuu xusay in la toogtay, lagana qaatay Mooto uu watay oo Khaat u waday cadowga.
Dhanka kale, waaliga wuxuu ka hadlay dagaal-beeleedyada waayadii dambe ka soo cusboonaaday deegaanada cadowga uu kaga sugan yahay Wilaayada Hiiraan, Wuxuuna sheegay in ay wadaan dadaal xoogan oo lagu qaboojinayo colaadahaas cadowga uu ka dhex hurinayo qabaa’ilada Muslimiinta.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Waaliga Hiiraan.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 08-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 09-08-1437 Hijri.